HV DC ngomhlaba, umoya nolwandle - Micro-Semiconductor.com
HV DC ngomhlaba, umoya nolwandle
Amandla kagesi ama-3kW high voltage (HV) DC anikezela ngo-90 kuya ku-264Vac okokufaka nokukhethwa kokukhishwa okulawulwayo, okukodwa (150, 200, 250, 300, ne-400Vdc). Okukhiphayo okusizayo kungakhethwa kusuka ku- + 5V / 0.5A noma + 9V / 0.3A.
Abaguquli be-AC-DC bahlinzekwa ngamacala afakwe ngokuphelele, nabalandeli abahlanganisiwe bokusebenza kokupholisa futhi balinganisa ama-28mm x 170mm x 64mm kuphela, ukuze asetshenziswe kuzinhlelo ezinomkhawulo wesikhala.
Amamodeli ochungechungeni akhelwe ngaphakathi ekunciphisweni komsebenzi nebanga lokushisa elisebenza kuma-20 kuya + 60 ° C. Kukhona nami2I-C ne-RS485 interface yokuxhumana, isilawuli se-analogue nokukhipha okuhleliwe / okukhona (kusuka ku-0 kuye ku-105%). Amandla wokukhipha nomkhawulo wamanje ungalawulwa nge-potentiometer efakwe ecaleni, i-0 - 5V voltage voltage noma nge-I2C izinhlelo. I2Imiyalo ye-C ingasetshenziselwa ukubuza imibuzo nokuhlelela ukunikezwa kwamandla ngesikhathi sangempela. Abaguquli be-AC-DC nabo bafaka i-PFC esebenzayo ne-diode eyakhelwe ngaphakathi ye-Oring.
Amandla wokufunda amanani, njengamandla okukhipha, ukushisa kwamanje nokwangaphakathi ngesikhathi sangempela, kanye nokuqapha ama-alamu okwehluleka kwabalandeli, ukushisa ngamandla nokushisa okuphezulu, kwenza amandla kagesi alungele amasistimu empendulo abukhoma kwezokwelapha, hi- rel nezinye izinhlelo zokusebenza lapho ukuthembeka kubaluleke khona kepha isikhala sinqunyelwe, yeluleka inkampani. Ngaphezu kwezintambo zikagesi zangaphansi kolwandle, ama-drones ahlanganisiwe nemifanekiso yezokwelapha, okuhlinzekwayo nakho kufanelekile ukushaja amabhethri ezimoto, i-automation yefektri kanye nokuhlolwa okungekho esizeni.
Amandla kagesi anokwethenjelwa aqinisekiswe ku-EN / UL62368-1, ngolwazi lwe-A / V, ukuphepha kwemishini yezobuchwepheshe, kanye ne-EN55032, ye-EMC.
Onke amamodeli akuchungechunge lwe-AEK 3000 HV ahlanganiswe iwaranti yeminyaka emithathu.
2: 1 MIPI switch yedatha engu-2x + 1x iwashi D-PHY, noma i-2x C-PHY
Ebizwa nge-PI3WVR628, kuyisitishi sesithupha esisodwa se-single-pole, double-cast (SPDT) esekela imi...
Kuzosungulwa i-RAF Space Command, ezokwethulwa eScotland
UNdunankulu umemezele ukusetshenziswa kwemali engango- $ 24.1bn, eminyakeni emi-4 ezayo, ekhuluma ne...
I-UK yenziwe: Isixhumi se-pitch esingu-60A 8.5mm
“Lokhu kusho ukuthi izinhlelo zokusebenza ezifana nokushaja ibhethri zingabhekiswa ngaphandle kokut...
Amandla kagesi ama-3kW high voltage (HV) DC anikezela ngo-90 kuya ku-264Vac okokufaka nokukhethwa ko...
I-LMO yomsindo ophansi yi-1 x 1mm
Kunemikhiqizo engama-32 ochungechungeni lwe-TCR3RM, njengoba kuzokwaziwa, ngemiphumela eyodwa engagu...